Iglasi yokugquma ubushushu yokwaleka kulungiswe ngokuqhubekeka enye okanye izinto ezininzi ze-nano-powder. Izinto ze-nano-ezisetyenzisiweyo zineempawu ezizodwa zamehlo, oko kukuthi, banesithintelo esiphakamileyo kwimimandla ye-infrared kunye ne-ultraviolet, kunye nokuhanjiswa okuphezulu kwindawo ebonakalayo yokukhanya. Sebenzisa iipropathi zokugquma ubushushu ekuhleni, zixutywe ne-resin ephezulu yokusebenza kwendalo, kwaye zilungiswe ngobuchwephesha bokulungiselela iteknoloji ukulungiselela ukonga umbane kunye nokuthambisa ubushushu okusingqongileyo. Phantsi kwesiseko sokungachaphazeli ukukhanya kweglasi, kufezekisile ukonga amandla kunye nokupholisa ehlotyeni, kunye nokugcina amandla kunye nokulondolozwa kobushushu ebusika.
Kwiminyaka yakutshanje, ukuphonononga iindidi ezintsha zezinto ezinobushushu bokusingqongileyo ezinobushushu bekusoloko kuyinjongo elandelwa ngabaphandi. Ezi zinto zinethemba lesicelo esibanzi kakhulu kumacandelo okonga ugcino lwamandla eluhlaza kunye nemoto yeglasi yokufudumeza i-nano powder kunye nezinto ezisebenzayo zefilimu ezinokukhanya okuphezulu okubonakalayo kwaye zinokungenisa ngokufanelekileyo okanye zibonise ukukhanya okusondele kufutshane. Apha ikakhulu sazisa nge-cesium tungsten bronze nanoparticles.
Ngokwamaxwebhu afanelekileyo, imiboniso bhanya-bhanya ebonakalayo esecaleni efana ne-indium tin oxide (ITOs) kunye ne-antimony-doped tin oxide (ATOs) iifilimu zisetyenzisiwe kwizinto zokufudumeza eziselubala, kodwa zinokuthintela ukukhanya okukufutshane ne-infrared ngamaza amaza angaphezulu kwe-1500nm. I-Cesium tungsten bronze (CsxWO3, 0 ＜ x ＜ 1) ine-transmitter ebonakalayo ebonakalayo ephezulu kwaye inokufunxa ukukhanya ngokukhanya okungaphezulu kwe-1100nm. Oko kukuthi, xa kuthelekiswa nee-ATOs kunye nee-ITOs, i-cesium tungsten bronze ine-blue shift kwi-infrared ye-infrared incopho yayo, ngenxa yoko itsala umdla nangakumbi.
I-cesium tungsten bronze nanoparticlesUxinaniso oluphezulu lwezithuthi kunye neempawu ezizodwa zamehlo. Banokuhambisa okuphezulu kwindawo ebonakalayo yokukhanya kunye nefuthe lokhuselo olomeleleyo kwingingqi ekufutshane ne-infrared. Ngamanye amagama, izinto ze-cesium tungsten bronze, ezinje nge-cesium tungsten bronze ebonakalayo yokugquma ubushushu, inokuqinisekisa ukuhanjiswa kokukhanya okubonakalayo (ngaphandle kokuchaphazela ukukhanya) kwaye kunokubukhusela ubushushu obuninzi obuziswa kukukhanya okufuphi ne-infrared. Umlinganiso wokufunxa α wenani elikhulu lezinto eziphathwayo simahla kwinkqubo ye-cesium tungsten yobhedu ilingana nengxinano yesiphatho simahla kunye nesikwere sobude bokukhanya kokufunxwayo, ke xa umxholo wecesium kwiCsxWO3 unyuka, uxinzelelo lweziphatho zasimahla Inkqubo inyuka ngokuthe ngcembe, ukuphuculwa kokufunxa kwingingqi ekufutshane ne-infrared kuyacaca. Ngamanye amagama, ukusebenza kwe-infrared shielding performance ye cesium tungsten bronze inyuka njengoko umxholo wayo we cesium unyuka.